Lokanga sy Valiha: Iri-mahory… manahirana | NewsMada
Lokanga sy Valiha: Iri-mahory… manahirana
Par Les Nouvelles sur 08/01/2022
Arahaba soa, arahaba tsara… Ny arahaba toy ny fary lava vany, ka tsy lany hamamiana. Tsy noho ny fahatongavan’ny taona vaovao ihany izay arahaba izay amin’izao, fa eo indrindra koa ny fiavian’ny orana saika manerana an’i Mada­ga­sikara tato ho ato. Tonga amin’ny ilàna azy ihany amin’ny fo­toana farany; eny, so­mary tratra aoriana aza, ohatra, ny fotoam-piasana eo amin’ny sehatry ny fambolena amin’izao taom-pamokarana izao. Aleo misy kely na tratra aoriana toy izay tsy misy mihitsy. Mahavelom-bolo sy mampisy fanantenana indray ny taom-pijinjana amin’ity? Araka­raka izay atao sy vita… Toy izany koa ny amin’ny famatsiana rano sy jiro an-tanàn-dehibe?
Na izany aza, iri-mahory ihany ny fiavian’ny ranonorana rehefa mby amin’izay tafahoatra ny mety na tsy araka izay ilàna azy? Misy, ohatra, ny fanahiana sy fahatahorana tany na vatobe mihotsaka amin’ny faritra avo sasany noho ny fiavian’ny orana misesy loatra na tafahoatra. Mby ao an-tsaina ho azy amin’izany ny tanàna ambony eto Antananarivo. Hanao ahoana? Amin’ny faritra iva na tanàna ambany indray, efa misy manambana ny mety ho fiakaran’ny rano. Tsy hita be ihany? Manahirana. Ny any amin’ny avo, anahiana fihotsahan’ny tany na vatobe; ny amin’ny faritra iva, atahorana ny rano tondraka. Ny eo afovoany izany no tsara sy mety ary mahasoa?
Manimba zavatra izay mitranga sy atao rehetra na inona na inona, rehefa tafahoatra ny mety? Na mety ho ratsy fiafara aza… Toy izany, ohatra, izay misy sy iainana amin’izao firongatry ny valanaretina Covid-19 andiany fahatelo izao? Na toy inona filaza na fanamarinan-tena, vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fiambenana no mety sy anisan’ny antony fototra. Tafahoatra ny fahalalahana sy fahafahana amin’izay fitandroam-pahasalamana manoloana ny valanaretina tsy mbola resy tosika tanteraka, taorian’ny fanafoanana ny hamehana ara-pahasalamana? Nefa mbola mitoetra ary tokony hohajaina hatrany ireo fepetra sakana rehetra, fomba fiaina aza.
Tsy tongatonga ho azy ny firongatry ny aretina amin’izao andiany fahatelo izao, fa tafahoatra ary gaboraraka loatra ny tsy fiarovan-tenan’ny sasany na fantatra sy ekena izao aza fa mbola misy ny aretina tsy hita maso? Izao mirongatra be izao… Teo koa ny tsy fiheverana fa miara-monina amin’ny hafa ny tena. Ny tandrevaka kely ataon’ny olom-bitsy no mety hiteraka loza lehibe ho an’ny maro. Mafy no ho ny tamin’ny voalohany sy faharoa ny fahatelo: mahery vaika, ohatra, fa reraka avy hatrany ny marary, haingana sy mora mifindra… Efa karazana Delta? Na sanatria Omicron… Tsy fantatra. Inona ny marina? Mila fampahafantarana sy fanazavana mitohy.
Sao mamoa-doza koa ny tsy filazana na fanafenana tafahoatra amin’
izay tokony ho fantatra sy araky ny vahoaka, tsy zaza bodo na bado na hoe mangina sy tsy mi­hetsika aza: mila mahahala ny zava-misy, te hahalala… Lasa karazana valanaretina hafa ho azy amin’izao ny fisian’ny resaka etsy sy eroa, ny famoahana vaovao tsy marina, tsaho. Mety ho tonga amin’ny fa­mendrofendroana izany, na fanaratsiana, na fa­nenjehana… Satria tsy lazaina ny marina? Iri-mahory ny fahalalana azy? Mety mandamina na manakorantana, man­kahery na manakivy, mahafaly na mampalahelo… Saingy tsy maintsy atrehina ny zava-misy, mila fantarina sy avoaka ny marina.
Sao ny tsy fahalalana sy fanarahana ny marina no anisan’ny mahatonga ny sasany tsy rototra amin’izay fanajana ma­nontolo sy amin’ny an­tsipiriany ireo fepetra sakana tsy ahazoana sy iparitahan’ny aretina? Tsy inona fa fiarovan-tena, fiarovana ny hafa koa. Mbola ady fiady ny fanentanana amin’izany, fa mety karazana areti-mifindra hafa koa ny tsy fanajana fepetra hita sy iainana etsy sy eroa amin’izao? Eny, na efa maro aza ny marary, ny ao anaty fahasarotana, ny mamoy aina. Mahakivy ny hafa ny fahitana ny tsy firaharahan’ny sasany ny fitandroam-pahasalamana. Nefa mila miara-miady ny rehetra amin’ny fahavalo iombonana, tsy hita maso, tsy mifidy olona…
Ilaina mandrakariva ny fifampitenenana, ny fampitandremana; eny, na ny fanasaziana aza? Mety iri-mahory fa ma­nahirana… Nefa mila atao na voatery hatao, raha mitohy izao.